Maxay tahay sababta uu Shariif Xasan ubooqday Nairobi?
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo horey u ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya haatana ah musharax madaxweyne ayaa hada kusugan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya isagoo sida wararku sheegayaan safar deg deg ah kaga soo ambabaxay Muqdisho doraad gelinkii dambe. Mid ka mid ah gacan yarayaasha Shariif Xasan oo aan rabin in la magacaabo ayaa sheegay in Shariif Xasan xalay kulan waqti dambe qaatay la yeeshay raysul wasaaraha Kenya Raila Odinga iyo wasiiro ka mid ah golaha xukuumadda Kenya. Waxaana jiray kulan kale oo maanta ay yeesheen.
Ilo wargeeysada qaar waxay sheegayaan in Shariif Xasan lagacodsaday inuu codadka xildhibaanada uu ku leeyahay baarlamaanka siiyo musharax C/weli Gaas oo Kenya ay u aragto nin xiriir dhow la leh isla markaana aan ka hor imaaneyn qorshayaasha dawlada Kenya ee gudaha Soomaaliya.
Dawlada Kenya, sida ilo wareedkan uu sheegayo waxay ad uga walaacsan tahay in heshiiskii badda ee loo saxiixay sanadkii 2009 uu burburo iyo in carqalad ku timaado qorshaha shidaal baarista ee ay dooneyso inay ka sameyso meel u dhow xeebta Lamu oo badweynta Hindiya ka mid ah.
Shariif Xasan ayaa beryahanbo ka fekerayaa cida uu siinayo codadka taageerayaashiisa ku jira baarlamaanka taasoo sida cad uusan ku bixin doonin bilaash balse micne weyn ayey ugu fadhidaa waana sababtaasi mida keentay in saraakiisha Kenya kula gorgortamaan inuu codadka ku taageero C/weli Gaas marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee dhacaysa toddobaadka dambe. Shariifku waxaa uu heystaa illaa 65 xildhibaan oo ah kuwii uu isaga gacantiisa ku qoray ee baarlamaanka uu geeyay, iyo qaar isaga raacsan.
Ilo wareedyada ku dhow Shariif Xasan waxay sheegayaan in sababta Kenya u rabto in C/weli Gaas codka la siiyo ay tahay in illaa hadda masuuliyiinta Kenya ay ku kalsoon yihiin in C/weli Gaas uusan ka hor iman doonin qorshayaasha Kenya iyo heshiisyadii lala galay (Arintaasi waxaa xaqiijiyey Ilyaas Barre Shiil oo u xogwaramay Odinga markii uu ku laabtay Nairobi), iyadoo ay dhici karto in haddii musharixiin kale ay jagada madaxweynaha ku guuleystaan ay diidi karaan, gaar ahaan ragga bannaanka ka ah musharixiinta KMG ah ee loo arki karo inay yihiin kuwa u ololeynaya mabda’a wadaniyadda “nationalists”.
Sida lagu daabacay wargeysyada wadanka Kenya, Kenya waxay dejisay inay shidaal ka baarto illaa 8-goobood oo afar ka mid ah ay ku yaalaan xeebta Lamu. Waxaana afartaasi ka mid ah illaa labo goobood oo ku teedsan xeebta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana goobahaasi ka mid ah meel qiyaastii 15,000 square km ka baxsan xeebta Lamu halkaasoo qiyaastii ku beegan 3900 Sq km xeebta magaalada Kismaayo ee gudaha Soomaaliya.
Dhulka ay Kenya shidaalka ka baareeyso ayaa waxaa kujira Xeebta Kismaayo oo ay Kenya ubaxsatay magaca “dhul biyood lagu muransan yahay”. Illaa haddana DKMG ah ee xilkeedu dhamaaday kama hadlin boobka lagu hayo dhul biyoodka Soomaaliya, waxaana xiise leh in waqtiga ay arimahan Kenya ku dhawaaqday ay tahay xilli doorasho ay ka dhacayso Muqdisho oo dawladii dhacday maamulkeeda iyo musharixiinta cusuba ay ku jiraan loolan siyaasadeedtaasoo micne weyn ugu fadhida dawlada Kenya in waqtigan oo kale ay kaga faa’ideysato danaheeda qarsoon.
Saadaalin Laga Sameeyey Musharaxa Laga Yaabo in uu ku Guulaysto Xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Warar: Soomaaliya ma ahan sidii ay ahayd 3 sano ka hor, rajada Somaalina maahan sida ay waqtigaasi ahayd, taageerada beesha caalamkuna ma midaysnayn sida ay maanta tahay. Saddexdaas qodob ayaan ku salayn doonaa saadaashayda.
Waxayna kala yihiin: -
Waa madaxwaynahihii ugu danbeyay ee waddanka , waxaana uu kasoo jeedaa beelaha daga magaalada Muqdisho, waxa uu kamid ahaa dadka ugu rajada wanaagsan muddo bil kusiman ka hor, hase ahaatee waxaa dhaawacyo soo gaareen tartankiisa laba goor; waa midda koowaade markii uu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay inuu soo celiyo hogaamiye kooxeedyadii danbiilayaasha ahaa, ee nabaradii iyo dhaawicii ay gaysteen aysan wali bogsoon. Maadaama uu aha madaxwaynihii dalka cadaadis badan oo uu sameeyay waa loo hogaansamay; tan labaad markii uu xabadka u garaacay haddaan beesha Hawiye la dooran inaysan waxba kala socon doonin markaasi oo uu ilaaway in dalka lawada leeyahay ee aan lakala lahayn, wuxuuna dhumiyay qayb wayn oo kamid ah taageeradii iyo hammigii loo qabay, wuxuu kaloo dhumiyay diblomaasiyaddii looga baahnaa qof madaxwayne ah, oo xanaqiisii ayaa ka awood batay. Wali inuu noqdo madaxwayne waa ku jirtaa meesha , hase ahaatee rajadiisu waa 40%
Dhowrkii bilood ee uu xilka hayay wuxuu kasbaday sumcad kusiman koonfurta Soomaaliya. Maxaa yeelay gobollada Puntland oo ay joogaaan Soomaali fara badan waa ay isku dheceen oo waxaa lagu sameeyay mudaaharaadyo looga soo horjeedo markii xukuumadda iyo shacabka uu si siyaasadaysan shacabka soo dhawaystay. Farmaajo waa nin dhalinyaro ah oo aqoon yahan ah, saaxada siyaasaddana wuu ka maqnaa muddo sanad ah oo galaangalka gudaha waxaa uga fiicnaa Shariif Axmed, Gaas iyo Shariif Xasan. Dadka wax dooranaya qaab qabiil bay meesha ku fadhiyaan , waxayna u badan tahay in Farmaajo uu ka codyaraan doono labada masuul ee kor aan kusoo xusnay, hadii ay dadwaynuhu wax dooranayaan waa laga yaabi lahaa inuu soo galo kaalin. Rajada madaxwayne nimo ee uu leeyahay waxay kusiman tahay 20%
Caddow inkastoo oday miisaan shaqsiyadeed leh uu yahay uusanna dagaalladii sokeeye Aadin ahaan uga qayb galin , hase ahaatee rajadiisu waa ka liidataa dhammaan ragga kor ku xusan . Waana 10%
Ururka Ahlu Suna ee Gobalada Dhexe oo Isku Badalaya Maamul Gobaleed
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya Nagu qadan Mayso Todobaad" Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Pro,Jawaari.
Gudoomiyaha Golaha wakiilada Dowlada Federalka soomaaliya Maxamed Shiikh Cismaan (Jawaari ) ayaa ka warbixiyey xilliga ay dooranayaan Madaxweynaha Soomaaliya Baarlamaanku,waxaana uu sheegay in ay gudi u doorteen diyaarinta Nidaamka doorshada Madaxweynaha iyadoo ay dooranayan mudo aan ka badnayn todobaad " Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya Nagu qadan Mayso Todobaad" Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Pro,Jawaari. Gudoomiyuhu waxaa uu xusay in gudigan oo ka kooban 15 xubnood ay ansixiyeen isla markaana ay gudagalayaan howlaha Goluhu u igmaday ee ah sidii loo guda gali lahaa diyaarinta Doorashada Madaxweynaha soomaaliya.
Dhanka kalana waxaa Fadhoodii ugu horeyey ay goluhu ku dhaariyeen 8 mudane kuwaas oo goobta uu shirka ka socda soo xaadiray.
Mudaneyaashii maanta la dhaariyay ayaa waxaa ka mid ahaa
8 Saado Cali Warsame
(Dhagayso) Faarax Macalin Oo Ka Jawaabay Hadal Dhawaan Kasoo Yeedhay Madaxweynaha Is Maamulka Soomaali Itoobiya C/ Maxamed Cumar
Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Kenya Mudane Faarax Macalin oo waraysi gaar ah siiyey Idaacada Laanta Afka Soomaaliga ah ee Voa-da ayaa ka jawaabay weerar dhanka afka ah oo uu dhowaan Madaxweynaha Is Maamulka Soomaali Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar uu mariyey Idaacadda Voa-da, kaas oo ahaa inuu yahay Faarax macalin nin aan gobolka uu u dhashay waxba u qaban isla markaana uu yahay nin Al-Shabaab u hadla. Hadaba Faarax Macalin oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yiri "Annagu xorbaan nahay isagguse xor ma aha ” Waraysiagaas oo dhamaystiran halkan hoose ka dhagayso.
Madaxweynaha Galmudug C/Qeybdiid Oo Shacabka Ugu Baaqay in ey ka Baxaan Xaruumaha Dowlada.
Madaxweynaha Galmudug Cabdi xasan Cawaale Qeybdiid ayaa shacabka reer Galkacyo ugu digay in ay ka baxaan goobaha ay leedahay Dowladda, isagoo tilmaamay in wixii ahadda ka danbeya aan la Arki Karin dhismo dowladeed oo ay deganyihiin Shacabka.
Mr Qeybdiid ayaa sheegay in dowladii dhexe ee dalka ay dhistay xaruumo waa weyn kuwaas o ey ugu tala gashay in ey ugu adeegto shacabka waxuuna sheegay in loo baahnayahay in xaruumahaas laga baxo si umada loogu shaqeeyo.
Baaq uu u jeediyay madaxweynaha dadka Shacabka ah ee reer Gaalkacyo ayuu u sheegay in aysan ku qasbin in ay awood u adeegasan oo ay is tartiib ah uga baxaan Goobaha Dowladu Leedahay.
Sikastaba Madaxweyhe Qeybdiid ayaa waxaa uu u anbabaxay dalka Ethiopia isagoo halkaas kulamo kula qaadan doona madaxda dowlada Ethiopia waxaana uu sidoo kale ka qeyb geli doonaa aaska Resal Wasaarihii hore ee geeriyooday Melez Zenawi.
(Dhagayso) Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Oo Ka Warbixiyey Kulan Uu La Qaatay Madax Ka Socota Beesha Caalamka
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Aadan (Jawaari) oo ah Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulan uu la qaaday wafti ka socda Wadamada Reer Galbeedka iyo Ururka IGAD, isagoona uu xusay Mr Jawaari in kulankaasi uu ahaa is barasho dhex marta Mas'uuliyiintani iyo waliba sidii ay u wada shaqayn lahaayeen barlamaanka soomaaliya iyo baarlamaanada waftiyada uu qaabilay Gudoomiyuhu. Hadaba warbixintaas oo dhamaystiran halkan hoose ka dhagayso.
Dabaysha Isaac Oo Habeenimadii Xalay Ahayd Ku Dhufatay Gobolka Louisiana Ee Dalka Maraykanka (Waraysi)
Sidaad horeba ula socoteen waxaa baryahanba Dalka Maraynkanka iyo Dalalka dariska la ah ku dhuftay dabaysha Isaac, iyadoona habeenimadii xalay ahayd ay dabayshaasi ku dhufatay Gobolka Louisiana ee Koonfur Bari Maraynkanka.
Dabayshani ayaa la sheegay in ay yaraatay khatarteedii marka la dhinac dhigo tii ay gaysatay dabayshii Katrina oo toddobo sano ku dhufatay Gobolkaasi. Hadaba si aaanu faahin ugu helno arintaasi ayaa waxa uu khadka Telephone-ka uu kula xidhiidhay Wariye Maxamed C/ San Dheere Prof. Xasan Cumar Mahadallah, isagoona ka waraystay khatarka ay gaysatay dabayshaasi waraysigaas oo dhamaystirana halkan hoose ka dhagayso.
Xisbiga Kacdoonka Dhalinyarada Isbadal Doonka Soomaaliyeed Oo Xaflad Ku Qabtay Magaalada Caabudwaaq (Daawo Sawiro)
Kacdoonka dhalinyarada isbadal doonka somaaliyeed qaybtooda Gobolka Galgaduud ayaa xaflad balaadhan ku qabtay Magaalada Cabudwaaq ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud, Iyagoona sheegay in waxa loo aas aasay dhalinyaradani ay tahay danta guud sidii ay ugu doodi lahaayeen xuquuqda shacabka soomaaliyeed iyo tan dhalin yarada soomaaliyeed ee haatan ku jira xaalada cakiran.
Xafladani oo ahayd mid balaadhan ayaa waxaa kasoo qayb galay Waxgarad, Aqoonyahano, Siyaasiyiin, Culuma awdiin, Dhalinyaro, Haween, Ururada Bulshada Iyo marti sharafkale oo aad u tira badan.
Xiiray Maxamuud Cabdisalaan oo ah gudoomiyaha xisbiga kacdoonka dhalinyarada isbadal doonka soomaaliyeed qaybta Gobolka Galgaduud oo hadalo kooban kasoo jeediyey xafladani ayaa xusay in ay tahay sababaha ay u qaateen magacani sidii ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen la dagaalanka dhibtooyinka aafeeyey dhalinyarada oo ay kamid yihiin Jahliga, Qabyaalada, Xag Jirnimada iyo Wixii lamid ah oo dhamaantood ah cudurada ku badan dhalinta haatan. Sidoo kale gudoomiye Xiiray Maxamuud Cabdisalaan ayaa baaq u diray Xildhibaanada Soomaaliyeed ee haatan ka tirsan Gollaha Barlamaanka Soomaaliya, isgoona ugu baaqay in ay si daacad ah ugu adeegaan dadka iyo dalkaba.
Xafladani ayaa iyana waxaa hadalo kala duwan kasoo jeediyey dhamaanba Mas'uuliyiin kasoo qayb gashay, iyagoona si weyn usoo dhoweeyey dadaalka ay muujiyeen dhalinyaradani iyagu is xilqaamay.
Si kastaba ha ahaatee xafladani ayaa kusoo gaba gabowday jawi heer sare ah, iyagoona dhamaanba dadkii kasoo qayb galay ay si weyn usoo dhoweeyeen wacdarihii ay ka dhigeen dhalinyarada isbadal doonka ahi xafladaasi.
Maydad lagu arkay Gobbalka Shabellada hoose
Wararka naga soo gaaraaya Gobbalka Shabellada hoose gaar ahaan deegaanka Shalanbood ayaa sheegaya in Saakay lagu arkay deegaankaas laba qofood oo mayd ah.
Waxaa Labadaan ruux da’dooda lagu qiyaasay 40 ilaa 50 sano jir lamana garaayo sababta loo dilay iyo cida ka danbeysay dilkooda.
Goob jooge ku sugan deegaanka Shalanbood ayaa warbaahinta u sheegay in labadaas ruux ay jirkooda ka muuqatay rasaas.
Sikastaba Xarakada Al-Shabaab ay ka baxeen deegaano ka tirsan Gobbalka Shabellada hoose ayaa waxaa halkaa ku soo badanayay dilalka qorsheeysan iyo amaan xumo aad u balaaran.
Baarlamanka Cusub oo maanta kulan yeelanaya
Maanta ayaa lagu wadaa iney kulan isugu imaadaan Baarlamanka Cusub ee Soomaaliya,waxaana markii ugu horeesay shir gudoomin doona Afhayeenka dhowaan ladoortay ee Prof. Jawaari,kulanka maanta ayaa waxaa diirada lagu saari doonaa arimaha kusaabsan doorashada madaxweynaha iyo qaabka ay udhici doonto.
Kulanka maanta ayaa sidoo kale waxaa lagu dhaarin doonaa tiro xilibaano ah oo ay shalay maxkamada Sare usoo ogolaatay ineey kamid noqdaan baarlmanak cusub,xilibaanadaan ayaa ubadan qabqablayaashii hore ee hogaamiye kooxeedyada kuwaasoo dhibaato badan usoo geystay dalka iyo dadkaba.
Kulamo gaar gaar ah ayuu Gudoomiyaha xalay la qaatay Xildhibaanada cusub, waxaana ay aheyd qaarkood kuwa is barasho, mid ka mid ah kulamada ayuu la yeeshay Hogaamiyeyaashii hore ee dagaalka oo ay dib u celiyeen Gudiga farsamada, hase ahaatee ay fasaxday Maxkamada sare.
Gudoomiyaha cusub ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xilliga doorashada Madaxweynaha ay dhaceyso, iyadoo shalay Wakiiladii ka socday Beesha Caalamka ay dalbdadeen in la soo dedejiyo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Kulanka Baarlamaanak cusub uu maanta yeelanayo ayaa imaanaya maalin kadib markii la doortay Gudoomiye Baarlamaan iyo Labo kuxigeen, iyadoo Hey’adii u horeysay Dastuuri ah lagu doorto magaalada Muqdisho muddo 42-sano ah.
Wararki ugu danbeeyey ee dagaaladi Jubada Hoose
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo xoogan oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubada Hoose
Dagaalka xoogiisa ayaa ka dhacay deegaanka Cag-Libaax oo u dhaxeeya Degmada Afmadoow iyo Qooqaani halkaas oo ay xarumo u ah ciidamada Dowlada.
Sida wararku sheegayaan dagaalkan oo saklka ku hayo dagaalo shalay iyo doraad halkaasi ku dhexmaray ciidamada Dowlada iyo kuwa Kenya oo isku dhinac ah iyo Al Shabab ayaa ka danbeeyey marki ay ay dagaalyahano ka tirsan Shabab jidka u galeen kolonyo.
Ciidamada Kenyanka ah ee wadada loo galay ayaa ka yimid deegaanka Afmadow waxaana ay sahay u wadeen ciidamo ku sugnaa deegaanka Qooqaani sida ay saraakiisha Soomaalida sheegayaan.
Dagaalki maanta ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux oo labada dhinac ah.
Taliyaha ciidamada Dowlada KMG ee Jubada Hoose, General Ismaaciil Saxardiid ayaa sheegay in ay Al Shabaab kaga dileen dagaalka 20 ruux sidoo kalana ay ka gubeen sadex baabuur.
Saraakiisha Al Shabab oo iyana ka hadlay idaacada ku hadasho codkooda ayaa guulo ka sheegtay dagaalkaasi.
Xaalada ayaa caawa dagan, waxaana deegaanka Cag-Libaax hada gacanta ku haya ciidamada Kenya ee ka tirsan kuwa AMISOM iyo ciidamada Dowlada.
Madaxweyne Siilaanyo oo Xilka Ka Qaaday Wasiirka Warfaafinta
Madaxweyne Maxamed Maxuud Siilaanyo xafiiskiisa degreeto ka soo baxday ayaa xilka looga qaaday wasiirkii wasaarada warfaafinta JSL.
Wareegtada ka soo baxday madaxweynaha :
‘’Madaxweynaha Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu maanta Digreeto madaxweyne No: JSL/M/XILQ/249/1-1280/082012 xilka kaga qaaday Wasiirkii Wasaaradda Warfaafinta iyo wacyigelinta JSL”ayaa lagu yidhi war-saxafadeedka.
Waxaana intaas lagu daray ” Waxa aan aad kuugu mahadinayaa mudadii aynu wada shaqaynaynay. Xilalka Qaranka ayay dabcigiisa tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo. Sidaa darteed, waxaan gartay in aan kaa qaado xilka Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo wacyigelinta JSL”.
Waxaana la faray in uu xilka ku wareejiyo si ku meel gaadh ah Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga JSL, Mudane Axmed Xaaji Cali Cadami, inta masuul kale loo soo magacaabayo.’’
Ilaa hadda dhab ahaan looma oga sababta rasmiga ah ee keentay in uu madaxweynuhu xilka qaado ama shaqadii ka eryo wasiirrka warfaafinta, inkastoo ay jiraan warar aan lagu kalsoonaan karin oo leysla dhaxmarayo.
Dagaalo xooggan oo ka Qayb Qaadanaayaan Diyaaradaha Kenya oo ka Socda Duleedka Kismaayo
Wararka naga soo gaaraaya magaalada Kismaayo ayaa soo sheegaaya in dagaal xooggan uu ka socdo deegaanka Birta Dheer oo wax yar 60-KM u jira magaalada Kismaayo.
Dagaalkaani oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda oo gacan ka helaya kuwa Kenya iyo Xarakada Al Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Jaamaa_Cabdale ee duleedka magaalada Kismaayo ee Jubada hoose.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalka ay ka qeyb qaadanayaan diyaarado laga leeyahay Kenya, waxaana dagaalka oo bilowday barqanimadii maanta aan la ogeyn ilaa hada qasaaraha ka dhashay isgaarsiinta deegaanka oo xun awgeed.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo haddii uu jiro horumar ay ka sameeyeen dhinacyada dagaalamaaya ee Ciidaamda huwanta iyo Al shabaab.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha dowladda iyo Xarakada Al Shabaab hase ahaatee goor sii horeysay waxa ay dowladda cadeysay inay qabsaneyso Kismaayo halka Shabaab ay dhankooda sheegeen inay is difaacayaan.
Deg Deg:- Maamulka Khaatumo State Of Somalia Oo Soo Dhoweeyey Gudoonka Cusub Ee Barlamaanka Soomaaliya (Dhagayso)
Agaasimaha guud ee Wasaarada Arimaha Gudaha ee Maamulka Khaatumo State Of Somalia Mudane Maxamuud Sheekh Cumar Xasan oo waraysi gaar ah siiyey Warbaahinta Caalamiga ah ee Jornalizem.com ayaa ka hadlay doorashadii xalaasha ahayd ee loo qaaday dhamaanba musharixiintii ku tartamayey jagada Gudoonka Barlamaanka Dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyagoona sheegay in ay si weyn usoo dhoweynayaan ka Maamul ahaan Gudoomiyaha cusub ee loo doortay Gudoonka Barlamaanka Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Hadaba Agaasimaha oo ka hadlayaa arintaasi iyo waliba sida ay u dhacday doorsahadii loo qaaday dhamaanba musharixiintii ku tartamayey jagada Gudoonka Barlamaanka Soomaaliya oo uu ku guulaystay Maxamed Cismaan Jawaari Waraysigiisii oo dhamaystiran halkan hoose ka dhagayso.
Munaasibad Qalin Jabin Ahayd Oo Shahaadooyin Lagu Gudoonsiiyey Arday Ka Qalin Jabisay Machadka Diiniga Ah Ee Caa'isha Bintu Abu Bakar Sidiiq Oo Ka Dhacday Xarunta Machadka Ee Magaalada Buuhoodle (Daawo Sawiro)
Munaasibad balaadhan oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayey arday ka qalin jabisay Machadka Diiniga ah ee Caa'isha Bintu Abu Bakar Sidiiq oo ku yaala Magaalada Buuhoodle ee xarunta Gobolka Cayn ayaa ka dhacday xarunta Machadka, iyadoona ay munaasibadaasi ay kasoo qayb galeen qaar kamid Culuma awdiinta ugu waa weyn Gobolka Cayn, Waxgarad, Waalidiinta ardayda qalin jabisay, Dhalinyaro, Haween, iyo Marti sharaf kale oo aad u tira badan.
Munaasibadan oo ahayd mid balaadhan ayaa waxaa ugu horeynba lagu daahfuray Qur'aanka Kariimka, isagoona uu hadalo halkaasi uu kasoo jeediyey Maamulaha Machadka diiniga ah ee Caa'isha Bintu Abu Bakar Sidiiq C/baasid Xuseen Fayax oo ka war bixiyey heerarakii kala duwanaa ee Machadku soo maray iyo waliba dafcadihii ka qalin jabiyey.
Sidoo kale waxaa iyana halkaasi ka hadlay marti sharaf kale oo aad u tira badan oo dhamaantoodba ku nuux nuuxsaday in lagu dadaalo barashada diinta maadaama ay diintu ay tahay waxa kaliya rabi subxaanahu watacaalaa lala hortagi doono maalinta dambe.
Suldaan Siciid Cismaan Cali oo kamid ah Gollaha Dhaqan Maamulka Khaatumo State oo isna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn usoo dhoweeyey dafcadani ka qalin jabisay Machadkan, isagoona kula dar daarmay Walaalaha muslimiinta ah iyo bulsha weynta kasoo jeeda Deegaanada Khaatumo in wixii karaan kooda ah ay kusoo biiriyaan Machadka Caa'isha oo isagu aan lahayn dhisme u gaar ah oo ay wax ku bartaan ardaydu.
Ugu dambeyntii ayaa waxa uu Suldaan Siciid Shahaadooyin gudoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay Machadka Caa'isha Bintu Abu Bakar Sidiiq, isagoona sidoo kale isla munaasibadaasi ku gudoonsiiyey Abaal marino kala duwan dhamaanba ardaydii gashay kaalmaha Koowaad, Labaad, Iyo Saddexaad.
Ma aha markii ugu horeysay ii arday noocan oo kale ay ka qalin jabiyaan Machadka diiniga ee Caa'isha Bintu Abu Bakar Sidiiq, iyagoona dhamaanba ardaydaasi qalin jabisay ay yihiin dumar maadaama uu Machadku uu yahay mid haweenku ay wax ku bartaan.
Dadaalkii Shariif Xasan oo noqday hal bacaad lagu lisay Maqaal
Dadaalkii Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo horey labo jeer u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, ayaa kalkan waxa damac ugu jiray in uu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya.
Shariif wuxuu ka mid ahaa musharixiinta u taagan xilka madaxtinimadda Soomaaliya, laakin waxaas oo dhan waxa soo gabagabeesay oo riyadiisa ka dhigay hal bacaad lagu lisay, Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, oo noqday guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, kaddib doorasho shaley ka dhacday Muqdisho.
Maxa u diidaya Shariif Xasan in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya?
Waxa u diidaya iyadoo hadda hannnaanka wax lagu qeybsado siyaasadda Soomaaliya uu yahay qaab qabiil oo ah habka 4.5, taasoo ka dhigan, haddii beesha Digil iyo Mirifle ay qaataan guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu ka dhaxeen doono xilka madaxweynaha beelaha Hawiyo iyo Daarood.
Sida ay in oo sheegeyn dad joogay goobta ay ka dhaceysay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dugsiga General Kaahiyo Ex, Buluusiyo,Shariif aad ayuu uga carooday sida ay wax u dhaceyn, waxana markii dambe ay ku kaliftay in uu isaga tago goobta.
Shariif Xasan Sheekh Aadan hadda waa xildhibaan, laakin waa nin siyaasadda Soomaaliya galaangal ku leh, waayo , waxa uu doonayay in uu Cali Khaliif Galeyr oo u taagnaa beelaha Daarood uu ku guuleesto doorashadda guddoomiyaha baarlamaanka, si uu meesha ugu ciriiriyo beelaha hawiye musharixiintooda, laakin wax kasta gadaal ayey iska badleen, markii uu Prof Jawaari uu helay codad gaaraya ilaa 199-cod, halka Cali Khaliif uu soo dhaafi waayay 70-iyo dhowr.
Guusha Prof Jawaari waa la-isku baheestay
Guusha Prof Jawaari, waxa ay u muuqatay mid la soo qorsheeyay, waayo, waxa ka cad markii wareegii koobaad ay dhammaatay, waxa musharixiin seddax gaareysa ay codkooda ugu shubeyn Jawaari, taasoo keentay in Cali Khaliif aaqirkiina uu tanaasul muujiyo, isagoo sheegay in wax meesha ka socota aysan ahayn dimuquraadiyad iyo loolan toona.
Waxa dad ku dhow Shariif Xasan Sheekh Aadan ay sheegeyn markii arrintaas uu Cali Khaliif meesha ka sheegay in uu aad u carooday Shariif Sheekh Aadan. Isagoona sheegay in uu ballantii la galay Cali Khaliif ka baxay.
Si kastaba, waxa guul daradda la soo daristay Shariif Xasan ay dadka ku tilmaameen in laga soo shaqeeyay, laakin waa nin aad ugu xeel dheer arrintan, waxaba la lee yahay waxa uu hadda taageero hiil iyo hooba siin doonaa ra’iisal wasaarihii hore Soomaaliya Cabdi Wali Cali Gaas oo hadda musharax u taagan xilka madaxtinimadda Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa la sheegay in hadda ay saaxibo isku dhow yihiin Cabdi Wali, waxana uu ka soo horjeedaa in xilka madaxweynaha ay helaan beesha Hawiyo haddii uu isaga ku guul dareestay hankiisa.
Shariif Xasan waxa uu hadda ka soo horjeedaa madaxweyne Shariif oo isna ka mid ah musharixiinta hamiga ka leh in uu mar labaad ku guuleesto doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Labada Shariif waayahaba iskuma fiicneyn, waana tan keentay in Shariif Sheekh Axmed uu taageero siiyo Prof Jawaari.
Si kastaba, kubadda hadda waxa ay u dhexeysaaa Beelaha Hawiyo iyo Daarood, maadama ay soo hareen Digil iyo Mirifle, waxana ciyaarta Finalka loo badinayaa in ay ku guuleestaan beelaha Daarood, taasoo ah guusha Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hadda saaxibo dhow la ah Madaxweynaha Puntland Cabdi Raxmaan Faroole.
Isku soo duub la arki doonee sida ay wax noqdaan iyo cida madaxweynaha Soomaaliya noqoto, oo ay hadda u taagan yihiin in ka badan 80-musharrax.
Qaraxyo is Xig Xigay oo Xalay ka Dhaceen Gudaha Magaalada Marka
Wararka ka imaanaya magaalada Marka ee xarunta gobbolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in magaaladaasi shalay ilaa xalay ay ka dhaceen qaraxyo.
Magaalada Marka ee xarunta gobbolka Shabeelaha Hoose ayaa Xalay waxaa magaaladaasi ka dhacay labo qarax oo lala eegtay ciidamadda dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan degmadaasi.
” Walaal qaraxa waxa uu ka dhacay Shaleemadii hore ee Marka, waxa la kor saaray meel maqaaxi ah, hal qof ayaa ku dhintay, qof kalena dhaawac ayuu noqday” sidaasi waxa yiri guddoomiye ku xiggeenka Maamulka gobolka Sh/hose.
Sikastaba Qaraxyadaasi kadib ayaa waxaa magaalada xalay lagu soo rogay bandow kaasi oo ka bilaawanayey 6:00 maqrib-nimo kuna ekaa 5:00 subaxnimo.
Ra’isulwasaraha waqtigisa dhamaday ee Somalia Abdiwali gaas oo hab qabyaaladeeysan u dhaleeceeynaya Madaxweyne Shariif,Somaliland iyo Xukumadda Ethiopia.
Cod laga duubay Ra’iisul wasaarihii waqtigiisa dhamaaday ee C/wali gaas mar uu la hadlay beeshiisa qadka taleefoonka ,asiga oo ku tilmaamay Madaxweyne Sh.shariif qaswade ,sidoo kalena ku sheegay in shariif markii hore uu ahaa dadkii la dagaalamay Dowladii C/laahi yuusuf
Kuna tilmaamay Madaxweyne Shariif nin safar ku mashquulay iyo dibad jaceyl ku jiray
Ra’iisul wasaare ayaa sidoo kale wuxuu dhaleeceeyay Itoobiya asiga oo sheegay in Itoobiya Owrka lagu gacsanaayay ,Madaxweyne Shariif markii la doortay uu la kulmay Melez zanaawi
Ra’iisul wasaare Gaas ayaa sheegay in Itoobiya iyo Puntland inuu xiriiri fiican ka dhaxeeyay mudo ,asiga oo sheegay in itoobiya eeysan faragalin ku heyn hada Punland basle Koofurta Soomaliya eey faragaliso ,taas oo cadeeyn u ah heerka eey qabyaaladiisa gaarsiisantahay .
Muqdisho:- Madaxweyne Shariif oo u hambalyeeyey saddexda masuul ee ku guulaystay xilalka Baarlamaanka
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu hambalyeeyay Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya xilka loo doortay.
Shariif Sheekh Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeenba uu ugu hanbalyeeynayo xilka cusub ee ay uqabteen umadda Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Professar Jawaari ayaa wuxuu sheegay inuu rajeynayo in Baaarlamaankani uu wax badan ka qabto howsha qaran ee loo igmaday.
Wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu noqdo Guddoomiyihii ugu horeeyay ee Baarlamaanka oo aan aheyn KMG,isaga oo sheegay inuu rajeynayo in Baarlamaankan uu noqdo mid horumar iyo isbedel u keena shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Generaal Muuse Xasan oo ahaa Guddoomiyihii KMG ahaa ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Madaxweynaha uga warbixiyay qaabkii ay u dhacday doorashada guddoonka Baarlamaanka.
Wuxuu sheegay in howshii ay soo qabteen ee doorashada ay aheyd mid adag islamarkaana ay arintaasi uga gudbeen dadaal dheeri ah oo ay iska kaashadeen Gudigii doorashada.
Hadalkiisa isaga oo sii wata ayuu shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay in xilka Guddoonka Baarlamaanka loo dhiibo nin aqoon leh.
Xarunta Iskuul Buluuziyo ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacday doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale ku xigeenadiisa waxaana taasi ay noqotay mid taariiq ku ah shacabka Soomaaliyeed.
Taariikh Nololeedkeyga:Afhayenka Barlamaanka cusub (Muxammad Sheikh Cusman Aadan 'Jawaari')
Goobta iyo Taariikhda Dhalashada: Afgooye , Soomaaliya, Deseembar 07, 1945.
• Qalinjebin: Kulliyada Qaanuunka – Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed - Moqdisho, Somalia, 1982,
• Shahaado Macallinnimo, Machadka Macallimiinta (Istatuto Magistrale/aggiornamento magistrale) , Mogadishu, Somalia, 1967.
• Diploma in Islamic Law, Machad Daraasaad Islaami - Istituto Disciplina Islamica - Mogadishu, Somalia, 1964
• Shahaado Macaallinimo af Ingiriisiga, UNESCO, Mogadishu, Somalia, 1962
• Waxaan ku hadlaa, qoraa akhriyaa afafka: Somaliga (oo Maay & Maxaatiriba leh), Carabiga, Ingiriisiga, Taliyaaniga iyo Norwejiga.
• Senior Consultant Constitution Building: Somalia Constitution Making Support Project – UNPOS/UNDP - May 2008 – December 2011;
• Wasiir: Wasaaradda Gaadiidka Dhulka iyo Cirka.
• Wasiir: Wasaaradda Shaqada & Arrimaha Bulshada.
• Wasiir-kuxigeen: Wasaaradda Gaadiidka Dhulka iyo Cirka.
• Xildhibaan: Xubin Golaha Shacabka. 01/1984 – 05/1990
• Xoghaye Joogto: Wasaaradda Gaadiidka Dhulka iyo Cirka. 1984-1985
• Xoghaye Joogto: Wasaaradda Shaqada & Arrimaha Bulshada. 1979-1984
• Agaasime Guud: Wasaaradda Shaqada & Arrimaha Bulshada. 1975-1979
• Ku xig. Ag. Guud: Wasaaradda Shaqada & Arrimaha Bulshada. 1973-1974
• Ag. Waaxda Shaqada: Wasaaradda Shaqada & Arrimaha Bulshada 1974-1975
• Madaxa Qaybta Baarista shaqada: W/ Shaqada & Arrimaha Bulshada. 1972-1973
• Isuduwaha Xafiisyada Shaqada Gobollada: W/Garsoorka Shaqada iyo arrimaha Diinta 1969-1972.
• Xubin ka mid ah Guddiga Farsamo ee Diyaarinta Dastuurka Jumhuuriyadda Soomaaliya. Mogadishu, Somalia. 1989-1990 - Guddigan wuxuu Qormadii Dastuurka u Gudbiyeen Golaha Shacabka . Dood muddo b5 bilood socotay ka dib waxaa la ansixiyey 12ki Oktobar 1990 waxaa Faafinta Rasmiga ah lagu soo saaray 14 Oktoobar 1990.
• Guddoomiyaha Kooxda (Panel) Diyaarinta Sharciga Shaqada Soomaaliyeed ( Somali Labour Law) iyo Sharciga Shaqaalaha Rayadka ah ee Dawladda (the Somali Civil Servants Law) -Mogadishu, Somalia.1970 - Guddiga wuxu dib-u-habayn ku samayey habka meeleynta Shaqaalah Dawladda, wuxuuna hirgeliyey jagooyinka “Xoghaye Joogto” iyo qiimaynta Xirfadleyda iyo Farsamo yaqaanada – heerka Sharciga Shaqaalahana wuxuu aad u waafajiyey heer xuquuqda caalamiga ee loo oggol yahay Shaqaalaha.
• Xubin ka mid ah Guddi dhexdhexaadinta khilaafaadka – (Trøndelag Konfliktrådet) - Wasaaradda Garsoorka;
• Kaaliye Qareen - Leif Strøms Jus-Informasjonen law firm;
• Xoghayaha Ururka Qareemada Caalamiga ah ee Trondheim - International Lawyers Association, Trondheim, Norway.
wareegii Koowaad oo Jawaari Hogaaminayo
Jawaari ayaa heley kaalinta koobaad Cali khaliif galeedh na waxa uu soo galay kaalintii labaad laakin halkaas waxaa cododkooda Cabdi xaashi iyo Xidig oo kubiirsheen codkoodi , hadaba Cali khaliif galeydh ayaa caro kamuujiyey isagoo leh waan sii wadanayaa ee halkaas kawada qeebtii labaad.
1-Prof, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo helay 119-cod
2-Prof. Cali Khaliif Galeyr oo helay 77-cod
3-Cabdi Xaashi Cabdullaahi 23-cod
4-C/rashiid Xidig 10-cod
5-Xasan Abshir Faarax 5-cod
Ilaalada C/wali Gaas iyo Shariif Xasan oo lagu amray ineey hubkooda kala Baxaan Goobta lagu dooranayo afhayeenka
War hada naga soo gaaraya hoolka lagu dooranayo gudoomiyaha Baarlamanka,ayaa waxay sheegayaan in shirgudoonka baarlamanka ay ilaalada Xilibaanada Shariif Xasan iyo C/wali Gaas ku amreen ineey hubkooda kala baxaan goobta.
Gudoomiyaha KMG ayaa codbaahiye kusheegay in ammaanka goobta siwanaagsan loo adkeeyay isla markaasna aan loo baahneen in hub lala soo galo,markii uu amarkaas soo baxay ayaa ilaalada shariif xasan hubkooda kala baxeen meesha,laakiin waxaa istaagay C/wali Gaas kaasoo u muuqday mid kaxun amarkaas.
C/wali Gaas ayaa mudo 5daqiiqo ah waxa uu lamurmayay shir gudoonka laakiin waxaa losheegay inaan loo baahneen in hub meesha lala soo galo islamarkaasna dhamaan musharaxiinta ay yihiin kuwo usiman hubna aan meesha lala soo gali doonin.
Sida caadiyanka ahba madaxda ugu sareysay dowladii dhacday ayaa marwalbo ay shir ama munasabad kasoo qeyb galayaan waxay soo wadan jireen ilaalo qaas u ah,iyadoo madaxweynaha uu xilkiisa dhacay uu qaas uleeyahay ilaalo lagu magacaabo Aala Sheeikh,halka ra’iisul wasaarihii uu isna xilkisia dhacayna ay ilaalo uyihiin wiilal uu kakeensaday Puntland.
Wali waxaa socda hada qabanqaabada waxaana lagu wadaa in goordhow ay bilaabato codeynta gudoomiyaha baarlamanka,waxaana idiin balanqaadeeyna inaan hadba wixii kusoo kordha aan idinla soo socodsiino.
Xubin Iyo Xeyb oo Hanjabaadyo u Diray Puntland
Kulan ay iskugu yimaadeen waxgaradka maamulka xubin iyo xeyb ayaa waxey hankabaad kulul u direen maamulka Puntland.
Maamulka xubin iyo xeeb ayaa Warsaxafadeedkani ku sheegay in ay Maamulka Puntland ay Xabsiyadooda ku Jiraan dad ka soo jeeda Deeganada Xubin iyo Xeeb, iyagoo ay tilmaamay in ay dadkaasi Maxaabiista ah ay wax Danbi ah laheyn,
Masuuliyiinta iyo Odayaasha Dhaqanka ee Xubin iyo Xeeb ee kulanka yeeshay ayaa Warsaxaafadeedkii ka soo baxay kulankooda, ay ugu hanjabeen Madaxweynaha maamul Goboledka Puntland, iyagoo sheegay in ay arinkaasi haddii uu wax ka qabanwaayo amaba uu soo deyn waayo ay Taalaabo ku dhaqaaqayaan Maamulka Xubin iyo Xeeb.
Hanjabaada Xubin iyo Xeeb ayaa ku soo aadysa Xilli uu Taliyaha Xabsiga Gaalkacyo uu Dowladda ugu Baaqay in ay Maxaabiista Xabsigaasi ay heysato xaalad nolol Xumi ayna wax ka Qabtaasi arinkaasi ama uu sii deynayo Maxaabiista, iyadoo maamulka Xubin iyo Xeebna ay tahay markii ugu horeysay uu Baaq Nuucaani ah u dirto Maamulka Puntland.
Sikastaba kulanka ayaa ahaa mid xasaasi ah oo ey canbaareen iyo hanjabaaydo ey u dirayeen maamul goboleedka Puntland.